Ganacsade Soomaaliyeed Oo Caawa Lagu Dilay Magaalada Nairobi, Kenya – Goobjoog News
Kooxo hubeysan ayaa caawa maqrinimadii goobtiisa ganacsi oo ku taalla bartamaha xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ku dilay Mustaf Sheekh Cabdullahi oo ahaa wiil dhallinyaro ah islamarkaana xilliga la dilayey waxaa isu diyaarinayey xiritaanka goobtiisa ganacsi .
Qaar kamid ah ehlada Marxumka la dilay ayaa sheegay in kooxda dilka geysatay ay tiro ahaan gaarayeen Saddex nin oo ah Kenyaan, waxaana ay sidoo kale qaateen lacago iyagoo gudaha u galay goobta ganacsi.
Marxuumka ayaa rasaastu kaga dhacday wadnaha waxaana markii hore isbitaalka loola cararay dhaawac ahaan isaga oo markii dambe isbitaalka ku geeriyooday.
Soomaali badan ayaa isugu soo baxay halka uu dilku ka dhacay iyaga oo dareen ka muujiyey falalka nuucaan oo kale ah oo soo noq noqday.
Marar badan ayaa xaafada Islii waxaa ka dhacay dhacdooyinka nuucaan ah waxaana inta badan kooxaha dhaca gaysta ay isku soo aadiyaan xiliyada la xirayo goobaha ganacsi.
Rag Hubeysan Oo Askari Ka Tirsan Dowladda Federaalka Ku Dilay Magaalada B/weyne
Madaxweyne Xasan Sheekh Oo Arrimo Ku Saabsan Horumarinta Iyo Dib u Dhiska Dalka Kala Hadlay Madaxa UNDP